Nagarik News - नरेन्द्र मोदीविरुद्ध कंग्रेसका अजय राय
नरेन्द्र मोदीविरुद्ध कंग्रेसका अजय राय
09 Apr 2014 | 09:23am
बनारस– भारतको सत्तारुढ दल कंग्रेसले लोक सभा चुनावमा भाजपाका ‘प्रधानमन्त्री' उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीविरुद्ध आफ्ना स्थानीय नेता अजय रायलाई उठाएको छ।
गुजरातका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका मोदी उत्तर प्रदेशको बनारस लोकसभा चुनाव क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएका छन्। कंग्रेसका राय त्यहाँका स्थानीय विधायक हुन्। मोदीविरुद्ध आम आदमी पार्टीका नेता तथा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले पनि बनारसबाट लोक सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
कंग्रेसका राय यसअघि सन् २००९ मा समाजवादी पार्टीबाट लोक सभा चुनावमा उठेका थिए। त्यसबेला रायले करिब १ लाख २५ हजार मत ल्याए पनि तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। राय भाजपाका पूर्वनेता हुन्। उनी त्यहाँबाट पाँचपल्ट विधान सभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। यसपल्ट मुलायमसिंह यादवको समाजवादी पार्टीले बनारसबाट कैलास चौरसिया र मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टीले विजयप्रकास जायसवाललाई चुनावमा उम्मेदवार बनाएको छ। कौमी एकता दलले भने मुख्तार अन्सारीलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ।
यसअघि सन् २००९ को लोक सभा चुनावमा बनारसबाट भाजपाका मुरलीमनोहर जोसीले जितेका थिए भने बसपाका मुख्ता अन्सारी दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। त्यहाँ सन् २००९ मा कंग्रेसले भाजपाका जोसीविरुद्ध पूर्वसांसद राजेस मिश्रालाई उतारेको थियो। लोक सभा चुनावमा उनी चौथो स्थानमा रहेका थिए।
दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवाललाई राजधानीमा एउटा रोड सोका बेला मंगलबार एक जनाले झापड हानेका छन्।
केजरीवाल उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्रको सुल्तानपुरी इलाकामा आपका उम्मेदवार राखी बिडलाको समर्थनमा रोड सोमा सामेल भएका बेला उक्त व्यक्तिले झापड हानेको थियो। उक्त व्यक्तिले केजरीवाललाई आफ्नो हातमा बोकेको माला पहिराइदिएको थियो। माला लगाइदिएपछि उक्त व्यक्तिले केजरीवाललाई झापड हानेको थियो।
झापड आक्रमणपछि केजरीवालले सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमा लेखे, ‘म विचार गरिरहेको छु कि ममाथि लगातार आक्रमण किन भइरहेको छ? यी आक्रमणको ‘मास्टरमाइन्ड' को हो? ममाथि आक्रमण गरेर उनीहरूले के पाउँछन्?' उनले टि्वट गरेका छन्, ‘के देशका सबै समस्याको समाधान हिंसा नै हो त? उनीहरू मलाई यो ठाउँमा यति बजे आइज भनुन्, म त्यहाँ आफैं जानेछु, त्यसपछि उनीहरू मलाई मन लागेजति कुटपीट गरुन्।'
केजरीवालमाथिको आक्रमणपछि आप समर्थकले आक्रमणकारी समातेर पिटपाट पारेको टेलिभिजन च्यानलको समाचारमा देखिएको थियो। पछि प्रहरीले आक्रमणकारीलाई आप समर्थकको हातबाट छुटाएर बचाउँदै लगेको थियो।
केजरीवालमाथि आक्रमणपछि भाजपा नेता विजय गोयलले आप नेताहरूको ‘कथनी र करनी'मा फरक भएका कारण क्रुद्ध सर्वसाधारण आपको विरोधमा उत्रेको दाबी गरे। उता केन्द्रीय मन्त्री तथा कंग्रेस नेता कपिल सिब्बलले भने लोकतन्त्रमा यस्ता आक्रमणको कुनै ठाउँ नभएको आक्रोस पोखे।
केजरीवालमाथि यसअघि पनि हिसार, दिल्ली र गुजरातमा आक्रमण तथा मसी फ्याँक्नेजस्ता घटना भएका छन्। भाजपाका मोदीविरुद्ध उम्मेदवारी दिन बनारस गएका बेला पनि केजरीवालमाथि अन्डा फ्याँकिएको थियो। बनारसकै बेनियाबागमा भएको जनसभामा केजरीवालमाथि मसी पनि फ्याँकिएको थियो। चार दिनअघि पनि दिल्लीको दक्षिणपुरीको एउटा रोड सोमा एक अपरिचितले केजरीवालमाथि आक्रमण गरेको थियो। केजरीवालले उक्त आक्रमणका लागि भाजपा जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका थिए।